Samsung na - ewepu Galaxy Buds ohuru nke dika “Juu” | Gam akporosis
Ndị a bụ ndị ọhụrụ Samsung Galaxy Buds ekara ka a «Juu»
Ọ bụ ezie na anyị nwere afọ ndị a na ọbịbịa nke Galaxy S20 gaa na Galaxy Buds ọhụrụ, ndị a ahapụla ihe anyị ga-enwe na ya ọhụrụ Buds yiri "Juu" Ma ọ bụrụ na ha na-enye otu atụmatụ dịka Apple's Airpods.
Anyị na-ekwu maka ya nguzogide mmiri na nkagbu mkpọtụ. Ihe abụọ dị mkpa iji nye nnukwu ahụmịhe na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ụbọchị ndị a mgbe ezigbo ekweisi nwere igwe okwu dị mkpa n'ihi mmụba nke oku vidiyo na nkewapụ mmekọrịta a.
Achọpụtara Galaxy Buds nke bịara na Galaxy S10 n'etiti igwe ekweisi kacha mmaỌ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ahụmịhe ọkpụkpọ abụghị nke kachasị mma; karịsịa ma ọ bụrụ na anyị jiri ha tụnyere Apple Airbods.
Ọ bụ ya mere anyị nwere olile anya na site na Buds + obere ihe na-erughị ọnwa abụọ gara aga, ha ga-enye ọmarịcha ọkpụkpọ oku kachasị mma. Mana eziokwu bụ na ọ bụghị eziokwu kpamkpam na ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ahụ ji kpochaa ihe ga-abụ Samsung Galaxy Buds ọhụrụ nwere mmelite mara mma.
Ma n'eziokwu anyị nwere site n’otu Samsung maka nke ọhụrụ AKG N400 Ha gụnyere atụmatụ ndị e kwuru nke kagbuo mkpọtụ na mgbochi mmiri. N'ime Buds ọhụrụ ahụ, ọ bara uru ịkọwapụta na ụdị "ndị Juu" nke na-eme ka ha bụrụ ezigbo njirimara ma na-egosipụta ọdịiche dị ukwuu na ụdị abụọ mbụ ahụ.
N'eziokwu, koodu aha Buds ndị a bụ «agwa» a jikọtara ya na imewe ahụ n'ụdị agwa. Igweisi a ga-atụle ihe dịka 2,8 cm ma ọ ga-adịkwu mma iru eyi. Buds ọhụrụ bụ SM-R180 ma ejiri obere okwu abụọ dị na mpaghara ọ bụla, nke otu lekwasịrị anya na ndetu dị elu na nke ọzọ na ala. Iji nye ahụmịhe ụda ahụ dị egwu ekweisi na-egosi nwere oghere dị na ihe yiri ihe anyị ga-ahụ na subwoofer.
Ọzọkwa ekweisi ndị a nwere igwe okwu ekwuru n’ime ya ka odibo nkwalite kpọọ ma soro onye enyemaka olu na-arụ ọrụ. N'ezie, ọ gaghị ekwe omume ijide n'aka na ndị a ga-enwe mkpọtụ mkpọsa na-arụ ọrụ.
Ndị a ọhụrụ Samsung Galaxy Buds nọ na mmalite nkebi mmepe, ya mere enwere ohere maka mmelite na nhọrọ iji mejuputa atụmatụ ọhụrụ ndị ọzọ. Anyị na-eche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị a bụ ndị ọhụrụ Samsung Galaxy Buds ekara ka a «Juu»
Ndị aghụghọ niile gam akporo mobile ngwaọrụ
Mwelite nchedo nke March maka OnePlus 7T ugbu a